Ibsa KFO: Marii Biyyaaleeysaa Haqa Qabeeysaan Qofa Gaaga’amni Siyaasaa Biyyatti Furama | OROMOTV
Gaaga’amni Siyaasa Biyya Keenyaa Furamuu Kan Danda’au Marii Biyyaalessaa Haqa Qabeessa, Dhugaa fi Hunda Hirmachisu Qofaani!
Yaada Marii Waliigaltee Mootummaa Paartiin Aangoorra Jiru Dhiiyesse Ilaalchisee Ibsaa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) Irraa Kenname
Waggoota sadan darbanis ta’ee sana dura, Kongireesiin Federaalawaa Oromoo (KFOn) gaaga’ama siyaasaa Itoophiyaa yeroo kamuu caala hundee gadi fageeffateefi hammaachaa dhufe furuuf Marrin Biyyaalessaa Hunda Hirmaachise akka taasifamuu gaafachaa turuun niyaadatama. Fakkeenyaaf, wayita Muummichi Ministeeraa, Dr. Abiyyii Ahmad gara tayitaatti dhufan, KFOn ce’umsa milkaa’aa itti fufiinsaan gara diimokiraasiitti geessu gochuuf, waltajjiin Marii Biyyaalessaa akka qophaa’uuf, wixinee maappii siyaasaa (road-map) qopheessinee yaada ijaarsaa dhiyeessinee turre. Dhiyoo kanas qophii Filannoo Biyyaalessaa marsaa 6ffaa bara 2013rratti, KFOn ibsa gaazexaawaa “Filannoon Iftoomina Hinqabneefi Hunda Hinhirmaachifne Diimokraasii Fiduu Hindanda’u” jedhee baase keechatti, nageenyiifi tasgabbiin biyyattii akka mirkanaa’uufi mootummaan itti gaafatamummaasaa akka ba’uuf waamicha taasisneerra.
Qaamaanis ta’ee walgayiiwwan karaa midiyaalee mul’atan kamiinuu, carraa argame hundatti fayyadamuun hooggantootni KFO ce’umsi gufataan biyyattii gara hookkara dabalaataatti akka hin kuffifneefi biyyattii baraaruuf waamicha marii fi waliigaltee biyyalessa akka taasifamu waamicha gochaa turreerra. Waamichi KFOn irra deddeebiin taasisaa ture dhageettii dhabee hafe. Filannoon bara 2012 yeroo dheeratus, Mootummaafi qooda fudhattootni filannichaa, filannoo amanamaaf haala mijataa uumuuf dursee Mariin Biyyaalessaa akka uumamuufi carraa sanatti akka fayyadamaniif KFOn waamicha taasiseera. Haala nama gaddisiisuun paartiin taayitaa dhuunfate waamicha keenya fudhachuurra paartii keenya ukkaamsuun, waajjiraalee keenya cufuufi hooggantootaafi miseensota KFO sadarkaa sadarkaan jiran hidhuun deebii farraa kenneera. Gaaga’ amni siyaasaa hamaan Waraana Tigiraayiin yeroo qabsiisamus, KFOn qaamoleen wal waraanan lammeen waraana dhaabuun mariidhaan rakkoo akka furataniif dabalataan waamicha godhaa tureerra. Ta’us paartiin taayitaa dhuunfateefi mootummaan, akkasumas deeggartootni isaanii waamicha keenya akka gaariitti fudhachuurra paartii keenya dhiibuufi duula miidiyaa ergaa sossodaachisuu of keesssaa qabu taasisaniiru. Dabalataanis, yeroo mootummaan filannoo adeemsisuuf beeksisetti, haalli qabatamaan biyyattii, filannoo bilisaa, haqaafi fudhatama qabu gaggeessuuf mijata akka hintaane akeekkachiiseera. Kanaafuu, Mariin Biyyaalessaaf dursi akka kennamuuf gaafachaa turrus, ammas mootummaan waamicha marii irra deddeebiin taasisaa turre fudhatama dhabsiisuun, ‘filannoo fakkeessaa’ KFO dabalatee paartileen siyaasaa gameeyyiin keessaa dhiibamaniifi mirga bu’uuraa filattoota dhabsiise itti fufe. Haala yeroo ammaa biyyattiirraa jiru hubachuu akka dandeenyetti, filannichi akka mootummaan jedhe nagaafi tasgabbii fiduu hindandeenye.
Yeroo dhiyoo kana keessa ammoo paartiin taayitaarra jiru barbaachisummaa Marii Waliigaltee Biyyaalessaa labsuu jalqabee jira. Qaamonni hedduun beeksisa marii mootummaan baase kun barfateera jechuun kufaa godhu. KFOn garuu, ‘hafuusaarra niture’ jenna malee, yeroo kamuu caalaa mariin yaadame kun karaa haqaafi sirrii ta’een hoogganamee biyyi kufaatiirraa akka baraarramtu filannoo keenyadha.
Kanaafuu, Mariin Walii-galteen Biyaalesaaf kun haaldureewwan kanaa gadii guutuun barbaachisaadha.
1. Waraanni ‘Seera Kabachiisuu’ jechuun eegalamee yeroo ammaa kana mata duree ‘Jiraachuufi Jiraachuu Dhabuun Biyyaaf’ jedhuun kallattii hundaan gaggeeffama jiru, hatattamaan dhaabbatee Mariin Biyyaalessaa hunda hammate akka godhamu niyaadachiifna.
2. Marichi qaamoota hawwaasa Idil-Asddunyaatiin beekamtiifi deegarsi kennameefiin akkasumas bilisaafi amanamoo ta’anii garee kamiifu hinloogne, kanneen hunda biratti fudhatama qabaniin hoogganamuu qaba.
3. Mariin Biyyaalessaa kun garee mormitootaa hidhannoon socho’an dabalatee dhaabbilee siyaasaa hundaa haqaan kan hirmaachisu ta’uu qaba. Bakka bu’iinsa gareewwan kanneenii hawwachuudhaaf gufuuwwaan seeraafi nageenyasaanii ta’an asumaan dhabasiifamiitu irra jiraata.
4. Hidhamtootni Siyaasaa hundinuu hiikamanii hirmaattota marichaa ta’uutu irra jiraata jenna.
Xumararratti, gaaga’ama yeroo amma biyyattii mudateef ga’ee hangafummaa kanneen raawwatan keechaa tokko hanqina wal-amantaa dhabuu hayyoota biyyattiiti. Kanaafuu, maqaa Marii Walii-galtee Biyyaalessaatiin qaama garee tokkoof looguun Marii Biyyaalessaa waamamurratti, walgayiin hunda hinhirmaachifne yoo waamame, dandeetti walitti bu’iinsa wal-waliinii mariin furuu akka hin qabaanne taasisa. Wal-amantummaan akka laafuuf qofaa gargaaruu danda’a. KFOn barbaachisummaa Marii Walii-galtee Biyyaalessaaf taasifamu gaafachuun paartii hunda irraa adda duree ta’us, adeemsi Marii Biyaalessaa karoorfamee haldureewwan xixiqqaa kanneen hanga hineegnettiifi adeemsi marichaa haqa-qabeessa yoohintaane, hirmaannaan keenya ‘hiika-dhabeessa’, adeemsi walii galaas ‘bu’a-maleessa’ akka ta’u asumaan niakeekkachiifna. Itti gaafatummaa kana sirnaan akka baanuuf uummattootni Itoophiyaafi hawaasni addunyaa nu waliin akka taatan waamicha goona.
Finfinnee: Onkoloolessa 15, 2021